काठमाडौंमा यी ठाउँमा धमाधम घर खाली हुन थाले, कोठाभाडा पनि सस्तो हुँदै ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौंमा यी ठाउँमा धमाधम घर खाली हुन थाले, कोठाभाडा पनि सस्तो हुँदै !
काठमाडौं । चीनवाट सुरु भएको कोरोना अहिले विश्वव्यापी फैलिएको छ । नेपालमा पनि दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएका छन् । सरकारले चैत ११ गते देखि लकडाउन सुरु गरेको हो । लकडाउनु सुरु भएसंगै काठमाडौंमा डेरा गरेर बसेका बाहिर जिल्लाका स्थानिय घर गएका छन् । लकडाउन सुरु भएको चार महिना हुँदा सम्म पनि सार्वजनिक सवारी साधन संचालन हुन सकेका छैनन् । काठमाडौं छोडेकाहरु पनि फर्कन पाएका छैनन् भने काठमाडौंमै भएकाहरुको पनि रोजगारी गुमेको छ ।
त्यसैले अब काठमाडौंमा भाडामा बस्नेहरुले कोठा छोड्न थालेका छन् । लकडाउन हुनु अघि कोठा पाउन निकै मुस्किल भएकोक ाठमाडौंमा अहिले घर खाली हुन थालेका छन् । पसल ब्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरुले धमाधम बन्द गरेका छन् भने बेरोजगार बनेकाहरु घर फर्कन थालेका छन् । लडाउनको कारणले काठमाडौंमा भोकै परिएला कि भनेर गाउँ फर्कनेको संख्या बढेको छ । पसल ब्यवसाय बन्द भएका कारण सटरहरु खाली भएका छन् भने घरमा भाडामा बस्नेहरु पनि घट्न थालेका छन् ।
काठमाडौंका कोठाहरु खाली हुनथाले पछि घरधनीले सस्तोमा नै कोठा भाडामा दिन थालेका छन् । सस्तोमा कोठा पाइने भएपछि महंगो भाडा लिएकाहरुले पनि कोठा छोड्न थालेका छन् । काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा महंगोमा बस्नेहरु त्यही बराबरको कोठा सस्तोमा फेला पारेको बताएका छन् । उनीहरुले सस्तो कोठामा आफुहरु सरेको बताएका छन् ।
लकडाउन अघि सम्म काठमाडौंको कलंकी स्थित मैत्रीनगर बस्ने राजु बलामीले ३ वटा कोठा २० हजारमा लिएका थिए । तर लकडाउन पछि नजिकै त्यती नै कोठा १२ हजार रुपैयामा पाएपछि त्यतै सरेको बताएका छन् । भाडामा बस्ने कोठा मात्र होइन पसल गर्ने सटर पनि खाली हुन थालेपछि घर धनीले सस्तोमै उपलब्ध गराउन थालेका छन् । पसल ब्यवसाय छोड्नेहरुको लहर चलेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
काठमाडौंको कलंकी, कालिमाटी, बल्खु, टेकु, थापाथली, सतुंगल, नयाँबजार, कीर्तिपुर, धोबिघाट, तिनकुने, जडिबुटी, बलाजु र थानकोट लगायतका स्थानमा कोठा खाली हुन थालेका छन् । यसरी कोठा भाडा सस्तो बनाउनुपर्ने भएपछि काठमाडौंका घरधनीहरुको भने चिन्ता थपिएको छ । ठूलो लगानी लगाएर भाडाकै लागि बनाइएका घर खाली हुन थालेपछि बैंकमा लिएको ऋणको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको घरधनीहरुले बताएका छन् ।
भर्खरै नेपालमा भूकम्पको धक्का